Classic Blackjack ။ Blackjack 21 (2022) အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှသည်
Main	/ Variations	/ Classic Blackjack
အားလုံး classic blackjack အကြောင်းကို။ Blackjack 21 - မဟာဗျူဟာ, နည်းဥပဒေများနှင့်အခမဲ့ဂိမ်း
Classic Blackjack (သို့) Blackjack 21 သည်ဂိမ်း၏အခြေခံအကျဆုံးဗားရှင်းဖြစ်သည်။ ကစားသမားများကဤဗားရှင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့ကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဆုံးလောင်းကစားခြင်းရွေးချယ်စရာများကိုခွင့်ပြုသည့်အတိုင်းဤဗားရှင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ကျနော်တို့ဂိမ်းတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ရှုပါ, သင်သိရန်လိုအပ်သမျှသည်အောက်တွင်ရှိသည်။
Blackjack Classic အခြေခံ
ဤဂိမ်းသည်ကစားရန်နှင့်ပျော်မွေ့ရန်အရိုးရှင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ 21 Blackjack ကိုကစားရန်သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သမျှသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလောင်းကစားရုံကိုရှာခြင်းဖြစ်သည်။ သင်လုပ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်သည် Gameklow ကိုလိုက်နာနိုင်လိမ့်မည်။ ဒီနေရာမှာဂိမ်းရဲ့အခြေခံကိုပြိုကွဲခြင်းမှဆင်းဆူပွက်ပါ။
Blackjack Classic သည်ကုန်သည်ကိုဆန့်ကျင်သည်
10 မှ K မှကတ်အားလုံးသည် 10 မှတ်တစ်ခုစီအတွက်တန်ဖိုးရှိသည်
သူတို့တစ်တွေအမှတ် (သို့) 11 မှတ်ကျိုးနပ်နိုင်တဲ့အတွက် aces တွေကအထူးဖြစ်တယ်
ဒီဂိမ်းမှာသင်ဟာကဒ်နှစ်ကဒ်ကိုအစမှာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလိမ့်မယ်။ ကဒ်နှစ်မျိုးစလုံးသည်ကုန်သည်၏မျက်နှာချင်းဆိုင်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကဒ်များကိုဆန့်ကျင်သည်။ ဤအရာသည်လမ်းမှထွက်ပြီးနောက် 21 Blackjack ၏ဂိမ်းသည်စတင်နိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးဂန္ထဝင် Blackjack လောင်းကစားရုံဆိုဒ်များ
ဂိမ်း၏ဂန္ဗားဗားရှင်းသည်ထိုတွင်လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်ယူရန်အလွယ်တကူရိုးရိုးရှင်းရှင်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းသည် 52 လက်ကဒ်မှကဒ်ပြားတစ်ခုတည်းကိုသာအသုံးပြုသည်ဟူသောအချက်ကိုဆိုလိုသည်မှာကစားသမားများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအိမ်သမ္မတရှိသည်။
ထို့ကြောင့်အွန်လိုင်းပေါ်မှ Blackjack 21 အွန်လိုင်းသည်အသုံးအများဆုံးဂိမ်းမဟုတ်ပါ, သို့သော်သင်လောင်းကစားရုံကုန်သည်တစ် ဦး ကိုဆန့်ကျင်နေလျှင်ပျော်မွေ့မည့်အကောင်းဆုံးသောဂိမ်းများဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ ဒီဗားရှင်းကစားတဲ့အခါစဉ်းစားရမယ့်စည်းမျဉ်းတွေကိုဒီမှာပါ။
အကယ်. သင်သည်အစအ ဦး မှ 21-point လက် (များသောအားဖြင့် Ace နှင့် ten-value card card card) မှ 21 ချက်ပါသောလက်ကိုရရှိပါကသင်အလိုအလျောက်အနိုင်ရသည်
အကယ်. အရောင်းကိုယ်စားလှယ်သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်သဘာဝအနက်ရောင် Blackjack ကိုရသင့်သည်, 21 Blackjack Online တွင် "Push" ဟုလည်းခေါ်ယူခြင်းကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်
ကစားသမားနှစ် ဦး စလုံးနှင့်ကုန်သည်နှစ် ဦး စလုံးသည်4င်းတို့လက်သည် 21 ခုထက်ကျော်လွန်ပါကဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။ ၎င်းကို Blackjack Terminology တွင် "bust" ဟုခေါ်သည်
သို့သော်သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးလက်နှစ်ချထားမှုနှင့်သင် 21 မှတ်ထက်နည်းသည်။ ဒါကအမြဲတမ်းဖြစ်တော့မယ်။ ဤအချက် မှနေ. သင်ရွေးချယ်စရာများစွာမှသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
Blackjack Classic ၏စည်းမျဉ်းများ
နားလည်နိုင်သည်မှာအနက်ရောင်ဂျက် 21 ဂိုးသည်အခြားတိကျသောစည်းမျဉ်းအချို့ရှိပြီး၎င်းကိုမကျူးလွန်မီချက်ချင်းကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့သည်မှတ်ဥာဏ်ကိုကျူးလွန်ရန်အတော်အတန်လွယ်ကူသည်, ထို့ကြောင့် 21 ကဒ်ဂိမ်း၏အောက်ခြေသို့ရောက်ရန်အခက်အခဲမရှိပါ။
Classic Blackjack ၏အများဆုံးဗားရှင်းများတွင်ရောင်းဝယ်သူသည် 16 ခုကိုပျော့ပျောင်းစွာထိမှန်ပြီး 17 နှစ်တွင်ရပ်တည်သင့်သည်
သဘာဝအနက်ရောင် Blackjack သည် 3:2ကိုပေးလိမ့်မည်။
Classic Blackjack တွင်သင်၏လက်များကိုတစ်ကြိမ် ခွဲ. ခွဲခွာခြင်းတစ်ခုစီတွင်အကြိမ်ကြိမ်ထိနိုင်သည်။ သို့သော်, အကယ်. သင်သည် ACES တစ်စုံကိုခွဲထုတ်ပါကသင်၌ရှိသော ACE တစ်ခုစီအတွက်ကဒ်တစ်ခုသာလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်သည်ဂိမ်း၏မူကွဲပေါ် မူတည်. ခွဲထွက်ပြီးနောက်နှစ်ဆတိုးနိုင်သည်။
ကစားသမားများကိုကဒ်အချို့ကိုနှစ်ဆလျှော့ချရန်ခွင့်မပြုပါ။ များသောအားဖြင့် 9, 10, 10 မှတ်အထိကဒ်များကိုနှစ်ဆလျှော့ချရန်ခွင့်မပြုပါ။
Classic Blackjack ကသင့်အားအာမခံအလောင်းအစားဝယ���ရန်ခွင့်ပြုသော်လည်းဤအလောင်းအစားကိုယေဘုယျအားဖြင့်မကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။
ဤဂန္ထဝင် Blackjack ၏ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်ဂိမ်းတွင်သင့်အား ထပ်မံ. ကူညီသင့်သည်။ ဂိမ်းတစ်ခုစီသည်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားလေ့ရှိပြီးတိကျသောစည်းမျဉ်းများကိုလေ့လာခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် 21 +3Blackjack သည်အထူး "Poker" စတိုင်လ်အလောင်းအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးအနည်းငယ်ကွဲပြားသောယေဘုယျစည်းမျဉ်းများကိုမိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မည်။
6:5အရောင်းကိုယ်စားလှယ်က Ace ကိုပြနေလျှင်
3:2တစ် ဦး သဘာဝ blackjack အပေါ်
ယေဘုယျအားဖြင့် Classic Blackjack ကိုကစားရန်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိသည်။ အကယ်. ကုန်သည်သည် 17 သို့မဟုတ်ပျော့ပျောင်းသော 17 ခုတွင်ပျော့ပျောင်းသော 17 သို့မဟုတ်ထိပုတ်ပါ။ Black Jack 21 သည်သင့်အားအခြေအနေပေါ် မူတည်. အကြံဥာဏ်များပေးရန်ခွင့်ပြုသည်။
ကစားသမား၏ 2-a (17) တွင်ကစားသူတစ် ဦး အပေါ်ကစားသမား၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုအပေါ်အမှတ် 18+ မှတ်ဖြင့်ရပ်တည်ပါ။
ကစားသမား၏လက်အောက်တွင်ကစားသမား၏ 2-a (Soft 17 ရှိအရောင်းကိုယ်စားလှယ်) ကိုကစားသမားအပေါ်တွင် 4-7 မှတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ကစားသမား၏ 2-6 ကိုကစားခြင်းကိုကစားသည့်ကစားသမားတစ် ဦး ၏လက်ဖြင့် 17 မှတ်ဖြင့်နှစ်ဆကျဆင်းသွားသည်။
ကစားသမား၏လက်ကိုအမြဲတမ်းပြသသည့်အခါအပေးအယူ 17, 99, 99, AA တို့ပြသခြင်းကိုအမြဲတမ်းခွဲခြားသည်။ အချို့ခြွင်းချက်အချို့ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင် 99 ရှိပါကအရောင်းကိုယ်စားလှယ်7နှင့် 10 တွင်သင်ရပ်တည်လိမ့်မည်။
ဂန္ထဝင် Blackjack ၏ဂိမ်းတစ်ခုချင်းစီကိုအခြေအနေတစ်ခုစီသည်ထူးခြားသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများစွာကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။ သငျသညျဇယားထဲကတစ်ခုကိုးကားတဲ့မဟာဗျူဟာကိုကြည့်ရှုနိုင်အောင်သင်ရိုးရှင်းစွာကြည့်ရှုနိုင်အောင်သင်ဤအကောင်းဆုံးပြဇာတ်အားလုံးအလွတ်ကျက်ရန်မလိုပါ။